Fitsirihana teknika :: Lavina ny fiaran’ny Zandarimaria miisa dimy • AoRaha
Fitsirihana teknika Lavina ny fiaran’ny Zandarimaria miisa dimy
Tsy lany nandritra ny fitsirihana teknika natao teny amin’ny Ivon-toerana fitsarana fiarakodia eny Alasora, ireo fiaran’ny Zandarimaria miisa dimy, omaly. « Tsy mahazo mandeha izy ireo raha tsy tomombana ny lafiny teknika. Miverina atao fitsirihana indray rehefa vita izany ka aorian’izay vao homena ny taratasy fankatoavana hifamoivoy », hoy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Foibe fitsirihana teknika, omaly.
Nahazo baiko avy amin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (Seg) ny amin’ny tsy maintsy hitsarana ireo fiarakodiany rehetra ny Zandarimaria manerana ny Nosy. Nosantarina teto an-drenivohitra izany, omaly, ka fiara miisa telopolo no nandalo fitsirihana.
« Tsy maintsy vita fitsirihana teknika amin’ity volana novambra ity avokoa ireo fiaran’ny Zandarimaria rehetra. Tsy misy mahasamihafa azy ireo fa mitovy amin’ny fitsirihana ireo fiara rehetra ihany ny fomba fitsirihana ny an’ny zandarimaria. Rehefa misy ny tsy tomombana dia tsy azo ampiasaina ilay fiara. Momba ireo fiaram-panjakana hafa indray dia miisa roa amby dimampolo sy valonjato ireo efa vita fitsirihana hatreto. Miisa fito amby fitopolo no tsy mbola mahazo mifamoivoy », hoy ny kolonely Rasambomanana, talen’ny hetsika ao amin’ny Foibe fitsirihana teknika.
Tapaka tamin’ny Filankevitry ny governemanta, tamin’ny 18 septambra lasa teo, ny tsy maintsy hanaovana fitsirihana teknika an’ireo fiaram-panjakana rehetra.
Tranga tany Ambanja :: Itoeran’ahiahy ny havan’ilay lehilahy maty tao amin’ny biraon’ny polisy